Author: Taushicage Shaktitilar
Qodobka 4aad — Gobannimada Jamhuuriyadda 1.
Rabshadahaasi, waxaa lagu soo afjaray heshiis awood qeybsi ah, oo ay wada gaareen Madaxweyne Kibaki iyo Raisal Wasaare Odinga. Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka. Dhanka kale, xiritaanka shirka maanta ayaa Wakiilka Xog-hayaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ku ammaanay dowladda Soomaaliya dadaalladeeda ku aaddan la-imaatinka jadwal ku dastuurka cusub.
By your continued use of this site you accept such use. Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Mareykanka.
Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada. Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka.
Diin aan ahayn Islaamka laguma faafin karo dalka. Somalia — small improvements, big challenges December 31, Burundi opposes AU calls to withdraw troops in Somalia December 24, Hase yeshee, habkan ma aha hab federaal ah, oo waxaa weli inta badan go’aanka yeelanaya dowladda dhexe ee uu hoggaaminayo madaxweynaha, xubanaha loo magacaabayo golaha wasiiradana, waxay ka imaan doonaan baarlamanka dibadiisa.
Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah. Waxaa sidoo kale laga taxadaray qaabka loo xalinayo khilafaadka ka dhasha doorashooyinka, waxaana uu ku tallinayaa dastuurka cusub in la sameeyo maxkamad gaar ah, oo xalisa khilaafaadka doorashooyinka, iyadoo aanan xil loo dhaarin doonin madaxweyne inta laga xalinayo khilaafka.
Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyay qaybta A ee jadwalka koowaad, waalaydi buluug furan cisub oo dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh.
Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.
Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka.
Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, 8 iyo naad, kadibna guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka soo jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si qodob walba re u ansixiyaan.
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama dastuura hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska. Berito oo arbaca ah, taariikhduna tahay afarta bisha Agoosto, Dalka Kenya waxaa looga dareeri doono afti loo qaadayo dastuur cusub, oo ay ku kala qeybsameen siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha madhabta masiixiga ee diinta masiixiga. Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa somalla casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Dadka diidan dastuurka cusub, waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Moi, oo isagu waddanka xukumayey 24 sanno. Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1. Gabadha qortay dastuurka Soomaaliya waxay rumaysan tahay dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee la yiraahdo Rastafari. Dastuurka cusub, oo ay taageerayaan Madaxweynaha dalka Mwai Kibaki iyo Raisal Wasaaraha Raila Odinga, ayaa waxaa uu si weyn wax uga badalayaa awoodda madaxweynaha, qaabka loo qeybsanayo kheyraadka waddanka, waxaa uuna abuurayaa aqal cusub oo senate-ka iyo dowladdo hoose oo awoodooda la xoojiyey.
Somalia edges closer to famine as millions struggle simalia food December 28, Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Sida halkaas ka muuqata Zion waa eray Yuhuudi ah oo ay u yaqaanaan Jurisalaam. Caasimada Online – December 31, Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Previous Post CONFIGURE TEXNICCENTER PDF
Next Post KERATOHYALIN GRANULES PDF